TogaHerer: Holland Oo Gacanta Ku Dhigtay Somali Maraykanka Ka Soo Baxsaday Oo Dhinaca Dhaqaalaha Ka Taageeri Jiray Argagixisada Al-shabaab
Holland Oo Gacanta Ku Dhigtay Somali Maraykanka Ka Soo Baxsaday Oo Dhinaca Dhaqaalaha Ka Taageeri Jiray Argagixisada Al-shabaab
Holland Oo Gacanta Ku Dhigtay Somali Maraykanka Ka Soo Baxsaday Oo Dhinaca Dhaqaalaha Ka Taageeri Jiray Argagixisada Al-shabaab.
Dowlada Netherlands ayaa xabsiga dhigtay nin la rumaysan yahay in uu dhinaca dhaqaalaha ka taakulayn jiray Argagixisad Al-shabaab ee Somalia ka dagaalanta, Ninka la qabtay ayaa ahaa nin Maraykanku si’ban u baadi-goobaayey.
Sir-doonka Holland ayaa sheegay in ninkaas oo ah 43 uu ku noolaan jiray Minneapolis dalka mareykanka ka hor intii aanu ka tagin bishii November sabnadkii 2008-kii, waxa uu Holland soo gaadhay bil ka dib markii uu Marayanka ka soo cararay.
Eedaysanaha Xabsiga loo taxaabay ayaa iska dhiibay dalka Holland, isaga oo ahaa Magan-geliyo doon. waxa laga soo qabtay xero qaxoonti oo 75 Km ka beegan dhinaca waqooyi bari Magaalad Amsterdam.
Ninkan oo aan la magac-dhabin ayaa ku eedeysan in uu hub u iibiyey kooxda Al shabaab ee Somalia ka dagaalanta, Eedaysanaha ayaa lagu hayaa Magalaada Rotterdam iyada oo loo diyaarinaayo in maxkamad la soo taago.